Kungani Nginomqubuko Phakathi Kwamashiya Ami? Izinduna, Kuchaziwe - PureWow - Ubuhle
Kusho Ukuthini Uma Unezinduna Phakathi Kwamashiya Akho? Izinduna, Kuchaziwe
What Does It Mean When You Have Acne Between Your Eyebrows
Ukuqhamuka phakathi kweziphequluli zakho? Sonke besikhona. Futhi into emayelana nalezi zinduna eziwuhlupho ukuthi zilungile zishaya i-dab maphakathi nobuso bakho. Njengeso lesithathu (noma amahlanu) ofunga ukuthi wonke umuntu ubheka lapho ukhuluma nabo.
Ngenhlanhla, kuvame ukuba lula ukusula. Sibuze UDkt Sandra Lee (yebo, i Pimple Popper uqobo) noDkt Jennifer Chwalek, udokotela wesikhumba oqinisekiswe yibhodi ku I-Union Square Laser Dermatology eNew York, ukuthola ukuqonda kokuthi kungani siphuma lapha ngqo nokuthi yini esingayenza ngakho.
izindaba zothando movie hollywood
Ziyini izimbangela zomqubuko phakathi kwamashiya akho?
Indawo ye-glabellar (igama lezokwelapha lesifunda esiphakathi kwamashiya) empeleni yindawo ejwayelekile kakhulu yokuthi abantu baphume, kusho uLee. Lokhu kungenxa yokuthi iyingxenye yendawo yakho ye-T (eqala ebunzini lakho futhi ilandele phansi ubude bekhala lakho bese iphelela esilevini sakho). I-T-zone ingenye yezindawo ezi-oiliest ebusweni bakho ngoba inezindlala ezigcwele kakhulu. (Futhi kuleli cala, i-sebum eningi ilingana nezinkinga eziningi.)
Izindlala ze-Sebaceous azinalutho kuma-pores akho futhi zingavimba izinwele zezinwele zakho ezibangela ukuvuvukala. Ngakho-ke, uma uqaphela, induna yenzeka kuphela lapho kunezinhlayiya zezinwele hhayi kakhulu ezindaweni ezingezona izinwele zesikhumba sakho — njengezintende zezandla zakho, amathe ezinyawo zakho, noma ulwelwesi lwamafinyila (isib. izindebe zakho noma izibilini zamakhala nomlomo wakho), kusho uLee.
Futhi esinye sezelelesi ezijwayeleke kakhulu phakathi kwamabhampa we-brow… i-drumroll… ukuthwebula. Noma uku-waxing. Noma empeleni noma yikuphi ukukhishwa kwezinwele okwenzayo ukugcina leyo unibrow isheke. Njengoba u-Lee eqhubeka echaza: Uma ukhipha (noma ucwilisa noma uchungechunge) izinwele zakho, uzikhiphela empandeni. Njengoba ikhula ibuya, idinga ukukhula kancane ngaphansi kwesikhumba ngaphambi kokuthi iphrinte ngaphesheya kobuso. Uma izinwele ezingenayo zibanjwa ngaphansi kwesikhumba phakathi nale nqubo, ziyangena, futhi zivele njengeqhubu elinjengenduna.
Lokhu kwenzeka ikakhulukazi kubantu abanezinwele ezijiyile noma ezisontekile, kungeza uChwalek, njengoba lolu hlobo lwezinwele lungahle lubuye emuva futhi lubhajwe ngaphansi kobuso obubangela i-folliculitis noma ukuvuvukala okukhulunywe ngenhla kwesikhumba sezinwele.
Uma ama-bumps noma ama-pustule ahambisana nokubomvu nokuqhuma kwesikhumba, kungaba yi-seborrhea. Leli elinye igama lomdanso futhi alikwazi ukuvela ekhanda lakho kuphela kodwa nakwezinye izindawo zobuso bakho — ikakhulukazi eduze kwamashiya akho, kusho uChwalek.
Ekugcineni, enye into okufanele uyicabangele yilokho okusebenzisa ebusweni nasebusweni bakho. Bheka ngokucophelela amalebula ezithako. Ngabe imikhiqizo yakho yokunakekelwa kwesikhumba ayinayo i-comedogenic (okusho ukuthi ngeke ivale ama-pores)? Futhi ingabe usebenzisa noma yiziphi izipholisi ezisindayo noma imikhiqizo yesitayela efana no-oyela noma ama-serum eduze kwezimpande zakho (isb. Uma une-bangs, ingabe uyayikhipha futhi uyikhiphe ebusweni bakho ngesikhathi sokuzivocavoca futhi uyigeze nsuku zonke ukuze ingagcini igcobe futhi inyathele phansi ebunzini lakho?
Uyiphatha kanjani induna phakathi kwamashiya akho?
Uma ujwayele ukuba nezinduna kule ndawo, iseluleko sami esingcono kakhulu kungaba ukweqa ukukha noma ukukhipha i-browser yakho. Ungahle uthande ukuzama ukushefa izinwele esikhundleni salokho, ngakho-ke awususi izinwele empandeni — noma kuhlale kunenketho yokuthola ukususwa kwezinwele ze-laser ukuthola isixazululo esihlala njalo, kweluleka u-Lee.
Izindlela zokususa izinwele eceleni, njalo qiniseka ukusebenzisa umuthi wokwelapha wendawo elwa namagciwane. Ngokufanelekile, ufuna okuthile okuzogcina indawo icacile kunoma yimaphi amabhaktheriya abangela izinduna afana ne-benzoyl peroxide, ezosiza ukuvimbela izinduna ezizayo ukuthi zingakheki kwasekuqaleni, kusho uLee.
UJennifer lawrence ubiza i-2019
UDkt. Chwalek uyavumelana ne-benzoly peroxide kodwa futhi uncoma ne-salicylic acid noma imikhiqizo yesibabule —kakhulukazi uma isikhumba sakho singayibekezeleli kahle i-bp. Ukuze uthole i-seborrhea, uzodinga ukubona udokotela wakho wesikhumba ukuze athole i-antifungal (njenge-ketoconazole cream) noma i-steroid efana no-hydrocortisone cream.
KULUNGILE, njengoba sesifunde ukuthi kungani futhi kunjani, ake sixoxe ngeminye yemikhiqizo yethu yokwelapha induna phakathi kwamashiya. Qaphela: Lezi zilungele kangcono ama-blackheads, ama-whiteheads, noma izindawo ezisanda kufufusa. (Ukuthola izinduna ezijulile, i-cystic acne, uzofuna ukubona i-derm ukuthola inkambo engcono kakhulu yokwenza, engafaka inhlanganisela yokwelashwa ngomlomo nangokwezihloko.)
Ukwelashwa kwama-La Roche-Posay Effaclar Duo Acne
Lesi sisekelo saseFrance sihlanganisa amaphesenti ama-5.5 e-benzoyl peroxide kanye no-0.4% we-LHA (uhlobo lwe-salicylic acid) ukuze kusheshe kubulawe noma yimaphi amabhaktheriya abangela izinduna, ngenkathi kushelelisa kancane kancane ukuthungwa kwesikhumba sakho. Siyamthanda umfakisicelo wethiphu okhombayo okhipha inani likakhilimu elincane kunawo wonke isikhathi ngasinye (okuyikho konke okudingayo ngempela endaweni phakathi kweziphequluli zakho bese ezinye).
Ukwelashwa kwe-SLMD BP Spot
Ngokukhetha okuncane, le bp ukhilimu ushaya indawo (ahem). Yenziwe ngezithako zokuthambisa njengevithamini E ne-allantoin ethomalalisayo, ivikela isikhumba sakho ekomeni ngenkathi usalapha indawo (noma amabala) okukhulunywa ngawo. Ngemuva kokugeza ubuso bakho, faka ungqimba omncane phezu kwanoma yimaphi amaqhubu ukusiza ukwehlisa ukuvuvukala nokusula amabhaktheriya asele ngemuva.
UPaula'Ukukhetha Ukumelana neBHA 9
Futhi uma isikhumba sakho singayibekezeleli kahle i-benzoyl peroxide noma unenqwaba yamabala amancane ongathanda ukuyenza, le salicylic acid egcwele ukwelashwa (enamaphesenti ayisishiyagalolunye wesithako sokuhlanza i-pore), inzima kakhulu kumaqhubu njengoba kungamakhanda amnyama anenkani.
Ithenge ($ 43)
UJan Marini Bioglycolic Bioclear Lotion
Lokhu kuphuma kuye kubo bonke abantu besifazane (nabanumzane!) Abanesikhumba esithandwa yizinduna futhi esibucayi. Njengoba igama lalo lisho, le lotion iyi-tad ene-hydrate kakhulu kunezinye ezikulolu hlu futhi ine-slip enhle kuyo (funda: kulula ukusabalala esikhunjeni sakho). I-combo ye-hyaluronic, i-azelaic, i-salicylic ne-glycolic acid iqinisekisa ukuthi akukho ndawo — enkulu noma encane — eshiywa ngemuva.
Ithenge ($ 75)
ICosrx Acne Pimple Master Patch
Uma uvamise ukuthola induna eyodwa kuphela phakathi kweziphequluli zakho, singancoma ukuthi siyiphathe nge-hydrocolloid patch efana nale. Izinto ezingangenwa manzi zakha umfece omncane phezu kwenduna, ziyivumele ukuthi yelaphe ngokushesha, ngenkathi iletha ne-beta salicylate ne-white willow bark endaweni. Futhi, kunciphisa ubungozi bokukhethwa okungenangqondo (nokuqunjelwa okulandelayo).
Ithenge ($ 5)
UDkt Dennis Gross Acne Solutions Ukucacisa Isigaxa Se-Sulphur Colloidal
Okokulungisa masonto onke, bushelelisa le maski e-creamy kunoma yiziphi izindawo ezinenkinga. I-Kaolin ne-bentonite ubumba bukhipha uwoyela omningi, kuyilapho isibabule (esinezinto ezilwa namagciwane nesifo sokuvuvukala) siyasula futhi sehlise isikhumba esivuvukile. Yiyeke imizuzu eyishumi ngaphambi kokugeza noma uyiyeke njengendawo yokwelashwa ebusuku.
Ithenge ($ 42)
OKUSHIWO: Imikhiqizo eyi-10 Esebenza Kakhulu Emqubeni Wabadala
ukuhambisana kwesifo somdlavuza we-zodiac
okudliwayo ukumisa ukuwa kwezinwele
Imibono yephathi lokuzalwa lama-40
ukutheleleka kwesikhumba fungal ikhambi lasekhaya